सजिलो र स्टाइलको पछि लागेर हामी यी ६ गल्ति गर्दै दुख पाउने रहेछौँ - यादका टुक्रा
सजिलो र स्टाइलको पछि लागेर हामी यी ६ गल्ति गर्दै दुख पाउने रहेछौँ
5 months ago 527 Views
हामी दैनिक जीवनयापनका क्रममा यस्ता गल्ती गरिरहेका हुन्छौ, जो स्वास्थ्यका लागि गंभिर समस्या बन्न सक्छ । जस्तो कसिलो जिन्स पहिरिनु, खाना पछि तुरुन्तै ब्रस गर्नु । हुन त यि सामन्य कुरा लाग्छ, तर यसको नतिजा असमान्य बनिदिन्छ ।
१. कसिलो जिन्स लगाउनु : अहिले फेसनमा छ, फिटिङ्स जिन्स । तर, फेसनेवल हुने चक्करमा यति कसिलो जिन्स पनि पहिरिनु हुन्न कि, जसले स्वास्थ्यमा असर गरोस् । किनभने कसिलो जिन्सले हाम्रो छाला एवं मांशपेशीलाई निरन्तर दबाब दिन्छ । नसामा पनि दबाव पैदा गर्छ । यसले गर्दा रक्तप्रवाहमा बाधा पुग्छ । असहज महसुष हुने त छदैछ, स्वास्थ्यमा पनि नोक्सान पुर्‍याउँछ ।
२. खाना खाए लगत्तै ब्रस गर्नु : खाना खानसथा तुरुन्तै ब्रस गर्ने बानी छ भने, त्यसलाई छाडिदिनुहोस् । खाना खाएको कम्तीमा तीस मिनेट वा एक घण्टा पछि मात्र ब्रस गर्नुपर्छ । जब खानेकुरा उच्च एसिडिक हुन्छ तब यसको अझ ख्याल राख्नुपर्छ । किनभने खाना पछि तुरुन्तै ब्रस गर्दा खानासँगको रसायनिक प्रतिक्रियाले गर्दा दाँतको प्राकृतिक इनामेल खिइन्छ । बरु, खाना खानसाथ पानीले राम्ररी कुल्ला गर्नुपर्छ ।
३. हाँच्छ्यु रोक्ने प्रयास : जब हामीलाई हाँच्छ्यु आउँछ, रोक्ने प्रयास गरिन्छ । हाँच्छ्यु त्यसबेला आउँछ, जतिबेला हाम्रो शरीरमा कुनै गडबडी हुन्छ । त्यसैले हाँच्छ्यु रोक्दा शरीरमा थप दबाव पैदा हुन्छ ।
४. परफ्युमको प्रयोग : परफ्युममा सिन्थेटिक तत्व मिश्रण गरिएको हुन्छ, जसले तिब्र सुगन्ध दिन्छ र प्राकृतिक तेलभन्दा सस्तो पनि हुन्छ । यहि सिन्थेटिक तत्वले गर्दा तपाईलाई चक्कर आउने, वान्ता आउने समस्या हुनसक्छ । यो आँखा, गला र छालाको लागि पनि हानिकारक हुन्छ । त्यसैले प्राकृतिक तेलयुक्त परफ्युम प्रयोग गर्नुपर्छ ।
५. सस्तो प्लाष्टिक बक्सको खाना : हामी कतिपय खानेकुरा सस्तो प्लाष्टि बक्समा राख्छौं । तर, यो कृत्रिम रसायनिक पदार्थले बनेको हुन्छ । प्लाष्टिक ब्याग लचिलो बनाउनका लागि त्यस किसिमको रसायन मिसाइएको हुन्छ । उक्त रसायन खानेकुरामा सजिलै फैलन्छ जो हामीले सेवन गर्दा शरीरमा प्रवेश गर्छ । त्यसैले यस्तो प्लाष्टि बक्सको साटो स्टेनलेस स्टिल, सिरामिक वा शिसाको भाँडामा खानेकुरा राख्नुपर्छ ।
६. एन्टिब्याक्टेरियल साबुनको धेरै प्रयोग : हाम्रो छालाको सतहमा धेरैजसो उपयोगी ब्याक्टेरिया हुन्छ । यसले हाम्रो शरीरलाई सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ । यदि तपाई एन्टिब्याक्टेरियल साबुनको धेरै प्रयोग गर्दा नराम्रो ब्याक्टेरियालाई शरीरमा प्रवेश गर्नका लागि अनुकुलता मिल्छ । त्यसैले एन्टिब्याक्टेरियल साबुन हप्तामा दुई पटकसम्म मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । एजेन्सी
Don't Miss it हर्मोनको गडबडीले यस्तो सम्म हुन्छ, यसरी घरैमा बसेर नि सन्तुलन गर्न सकिन्छ
Up Next मन्त्र विज्ञान हो, धर्म र अन्धविश्वास होइन, विश्वास नभए ॐ को यी प्रमाणहरु के हो त ?
2 days ago 1544 Views
5 days ago 237 Views
जीवनसाथी बिरामी हुँदा यी कुरा याद राख्नै पर्छ
हामी चाहँदैनौ, आफ्ना जीवनसाथी बिराम भएको । तर, सबै कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन । मानिसको शरीर सधै एकनास रहँदैन ।…
8 months ago 6631 Views
यी ६ कुराले लामो आयु मात्रै दिदैन, जीवन नै रमाइलो बनाउँछ, प्रयोग गर्नु पर्छ
लामो आयु बाँच्न पाइयो । स्वास्थ्य रहन पाइयो । सधै तन्दुरुस्त र फुर्तिलो भइयोस् । हरेकले यस्तै सोच्छन् । अतः…
7 months ago 3163 Views
हाम्रा ९ लापरवाही जसले गर्दा बच्चाको ज्यानै लिन सक्छ, पढ्नै पर्ने कुरा
हाम्रो सानोतिनो लापरवाहीले कहिले काहीँ घातक नतिजा दिन्छ । खासगरी बालबच्चा भएको घरमा बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ । कतिपय यस्ता…
7 months ago 1450 Views
20 hours ago 6315 Views
20 hours ago 3439 Views
19 hours ago 2306 Views
20 hours ago 1970 Views